PCT Letrozole पाउडर --- पाँच चीजहरु मलाई थाहा हुनु पर्छ !!! | AASraw
/ब्लग/Letrozole/PCT Letrozole कच्चा पाउडर - पाँच चीजहरु मलाई थाहा हुनु पर्छ !!!
प्रकाशित 11 / 05 / 2017 by Dr. Patrick Young मा लेखियो Letrozole.
Q1: हो रोजोलोल कच्चा पाउडर एक स्टेरॉयड?
A1: Letrozole कच्चा पाउडर, Letrozole को कच्चे माल स्टेरियोड पाउडर, एक प्रकार को होर्मोर हो, स्टेरॉइड, पीसीटी श्रृंखला संग सम्बन्धित छ, अन्य जस्तै tamoxifen,Clomid,Aromasin,
Halotestin, Anastrozole, यहाँ मूल जानकारी हो:
पिल्ट बिन्दु: 181-183 ° C, रङ: सेतो वा बन्द सेतो रस्टलिङ्ग पाउडर, मान्छेले Letrozole लाई सामान्यतया कोठाको तापमानमा भण्डारण गर्दछ। धेरै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूका अनुसार अन्य रूपहरू, Letrozole पाउडर उच्च, उच्च शुद्धता, ठूलो एक्टिटी, कम लागत हो। , पहिले अनलाइन किनेका छन्, पाउडरको 10 ग्राम हजारौं ट्याबलेट / गोलियों बनाउन सक्छ।
Q2: आइजोजोजोल पाउडर भनेको विरोधी स्तन क्यान्सरको लागि प्रयोग गरिन्छ?
A2:लेजरोल पाउडर कच्ची पाउडर महिलाहरु मध्ये लोकप्रिय छ जुन स्तनपानको क्यान्सरको लागी एक औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर यो केवल यसको लागि मात्र होइन, लेजरोजोलले शरीर सौष्ठवमा काम गर्दछ, शरीरको चयापचय दर उत्तेजित गर्न को लागी सबैभन्दा शक्तिशाली औषधिको रूपमा मानिन्छ। पदोन्नति गर्दै वोसो जलिरहेको। यो एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रल को स्तर कम गर्न र कम रोकथामिक azoospermia र endometriosis उपचार संग पुरुष रोगीहरु मा स्तर को शुक्राणुजनन को स्तर को कम गर्न मा उपयोगी छ। तेस्रो पीडित छनौट मौखिक aromatase अवरोधक, Letrozole फाइदा, वृद्धि हार्मोन, कोर्टिसोल, SHBG, बाध्यकारी प्रोटीन, एचडीएल, र यौन विशेषताहरु को विकास र विकास को हप्टिक उत्पादन को सन्दर्भ मा नाटकीय वृद्धि को उत्तेजित गर्न को लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यदि सबैले भने, फर्मारा पनि स्वस्थ प्रतिरक्षा समारोह, स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल स्तर, संयुक्त स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक कार्य, र मांसपेशियों को विकास को कम गर्न को लागी या तेल को छाला, जीनकोमास्टिया, र द्रव प्रतिधारण को रूप मा एस्ट्रोजनिक साइड इफेक्ट को सफा गर्न को लागी को क्षमता को बढावा गर्न को क्षमता पनि छ।
Q3: Letrozole पाउडर ए ए को राम्रो चिया को रूप मा प्रयोग गरिन्छ?
A3: एरिमेलेटहरू बढाउने प्रदर्शनको लागि जब एक aromatase अवरोधक छनौट गर्दा त्यहाँ सामान्यतया तीन साधारण छनौटहरू छन्; अरिमाइड, अरोसासिन र लेजोजेरोल र प्रत्येक प्रत्येक कार्यमा धेरै समान छ। एक aromatase अवरोधक उद्देश्य को मुख्य रूप मा नै नाम मा निहित छ; aromatase एंजाइम लाई रोकन को लागी। स्टेरॉइड प्रयोगकर्ताको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ anabolic androgenic स्टेरॉयड यस प्रक्रियाको माध्यमबाट एस्ट्रोजेन कन्फिगर गरिनेछ। यो एस्ट्रोजनको रूपान्तरण र निर्माण गर्न धेरै अवांछित साइड इफेक्ट हुन सक्छ, यसैले Letrozole ले एस्ट्रोजेन को स्तरलाई रोक्दछ, हाम्रो शरीरलाई हानिकारक पार्दछ।
Q4: म कतिजसो letrozole ले?
A4: Letrozole को अधिकतम खुराक जुन प्रयोगकर्तालाई प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ प्रति दिन 2.5mgs हुनेछ। यो धेरै अध्ययनहरुमा देखाइएको छ कि यो खुराक लगभग सबै व्यक्तिहरूमा शरीरमा लगभग सबै एस्ट्रोजेन समाप्त हुनेछ। यसभन्दा धेरै खुट्टा खुट्टामा मात्र खाली हुँदैन। प्रयोगकर्ताहरूमा लाइटनाइज हार्मोन, follicle उत्तेजना हार्मोन, र सेक्स हार्मोन बाध्यकारी विश्वबुलिन को मात्रा बढाउनको बावजुद Letrozole पछि पोस्ट-चक्र थेरेपीको प्रयोगमा प्रतिकूल हुन सक्छ। यो प्रयोगको समयमा एस्ट्रोजनको स्तर धेरै कम गर्न कम्पासको क्षमताको कारण हो। जब कम्ज रोकिएको छ यो यो एस्ट्रोजनको स्तरमा "रिफाउन्डर प्रभाव" मा परिणाम हुन सक्छ जुन यी बृद्धि उच्च हुन्छ, जुन पछि चक्र चक्रमा वा पछिबाट टाढा जान सकिन्छ।
Q5: के हुन सक्छ यदि अति भयो?
A5: यसको बारे कुनै शंका छैन, एस्ट्रोजेनको स्तर कमेन्टमा सुत्न मद्दत पुर्याउँछ र धेरै अधिक दमनले समस्याको सामना गर्न सक्छ।
रेजोजोलले शरीरलाई निकै धेरै सुत्न सक्दछ र सान्त्वना दिन सक्दछ र सहि कमजोर देखिन्छ।
यसकारण, उनीहरूले आफ्नो आहार कसरी डिजाइन गर्छन् जब यस्तो औषधि प्रयोग गर्ने बारेमा सोच्ने प्रश्न हो, वास्तवमा, आहार प्रदर्शन वृद्धि र पोषक तत्व संतुलनको बारेमा वास्तवमा सबै कुरा हो।
साथै, Letrozole कच्चा पाउडरको ओभरडाइजले कम estradiol स्तरहरूमा परिणाम ल्याउनेछ, जुन लिबोदो, डिप्रेसन, संयुक्त दुखाइ, वा फ्ल्याट-देखाने वाला माक्र्सको क्षतिको प्रतिकूल साइड इफेक्टमा परिणाम हुन सक्छ। यदि टोस्टरोस्टेरोन वा अरोमेटिबल स्टेरियोड्स प्रयोग गर्दा अवरोध भएको बेलामा Dianabol, असामान्य उच्च एस्ट्रायडोलले पनि लिबिड वा डिप्रेसनको हानि बढाउन सक्छ, पानीको अवधारण हुन सक्छ, र जिनेकोमास्टिया बढाउन वा बढ्न सक्छ।
यो sildenafil citrate (मासिक) प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?	रिकभरीका लागि पीटीसी औषधि-नोल्वाडेक्स, क्लोमेड, लेजोजोलोल, एरोसासिन, हेलोस्टिन